Ji’oota jahan dabre kana OMN torbanuma torbaniin komii, himannaafi doorsifni Boordii Birodkaastii irraa itti roobsamaa jira. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsJi’oota jahan dabre kana OMN torbanuma torbaniin komii, himannaafi doorsifni Boordii Birodkaastii irraa itti roobsamaa jira.
Yaada Jiraattota Godina Arsii Lixaa, OMN ilaalchisuun (Gur. 28,2020)
KFOn boruufi iftaan marii ummataa qaba.
Boru (Sanbata Duraa) – WALISO
Warri Bilxiginnaa hin rifattanii hin jeeqinaa. Walgahii shiikkoo wahii galma keessatti ummata waliin goona malee hiriira guddaa miti
Ji’oota jahan dabre kana OMN torbanuma torbaniin komii, himannaafi doorsifni Boordii Birodkaastii irraa itti roobsamaa jira. Dhimmoonni OMN ittiin himatame;
– Ajjeechaa saba Qimaamnti irra gahe gabaasuu
– Qondaala bara Wayyaanee nama 9 ajjeechisee 23 madeesse irratti komii ummataa bifa dokumantariin dhiheessuu
– Ajjeechaa barattoona Oromoo yunivarsilee garagaraa keessatti raaw’atame gabaasuu
– Yaada hogganoota mana lubummaa Oromiyaa tamsaasuudha.
Dhimmoonni kun dhugaa, dantaa, ilaalchaafi qurrama ummata Oromoofi saboota cunqurfamaa kan calaqqisiisaniidha. Soba, shira, shakkaafi daba farreen Oromoo kan saaxilaniidha. Sagantaalee kana dabarsuun ummata keenya biratti OMNif jaalala dabalee farreen Oromoo biratti dallansuu uumuun waan nama raaju miti. Hogganoonni fi hojjattoonni OMN sagantaale akkanaa dhiheessuu keessaniif boonuu qabdu. Akeeka miidiyaan sun dhaabbateef, jechuuns dhugaa Oromoo karaa dhugaatiin ifa baasuu, irratti waan cichitaniif. Warrin har’a doorsisa xalayaatiin dhugaa Oromoo ukkaamsuu barbaadu kun, dur warra akka Ayyuub Abubakar fi Abubakar Muusaa rasaasa itti roobsuun ajjeesanii dhugaa Oromoo awwaaluu yaalan. Gootonni sun awwaalamanis dhugaan Oromoo hin awwalamne. Daranuu iftee babal’attee addunyaa walgeesse. Dhugaan Oromoo gaafa dukkanaa sanuu hin moo’amne. har’a moo’uu dhiisii taakkuu takkaaf duubatti deebisuun hin danda’amu. Saba keenyaan hin shaikkinaa; farreenin ammoo abdii kutadhaa jennaan.
Nagaan Bulaa !!
Mootummaan kun dhimma Oromoo ukkaamsuuf jecha OMN ukkaamsuuf carraaqqiin inni itti jiru guddaadha. Dhaabbatni miidiyaalee biyyaa too’atu Ethiopian Broadcasting Authority (EBA) OMN irratti dhiibbaa guddaa godhaa ture. Ammas dhiibbaa irratti godhuu akkuma itti fufetti jira.
Dhimma Mana Lubummaa Oromiyaa ukkaamsuuf haasaa Bsa. Hayilamikaa’el sababeeffachuun mootummaan Bilxiginnaa akeekkachiisa cimaa OMN’f kennuu isaa xalayaa fb irra naanna’aa jirtu irraa argitan jedheen amana. Kana qofaa miti.
Dhimmaa Barattoota Oromoo naannoo Amaaraa keessatti miidhamaa turan sana OMN yeroo gabaasaa turetti dhimmi sun akka ukkaamfamuuf EBA akeekkachiisa OMN tti ergee ture. Mee xalayaa barruu tana waliin maxxanse kana ilaalaa! Waan OMN gabaases irra deebi’aa ilaalaa. Sababni isaan OMN akeekkchiisaniif odeeffannoo madaalawaa miti kan jedhuudha. Garuu yeroo dhimma barattootaa sana qaama dhimmi ilaalutti OMN bilbillee gaafatu deebii gahaa hin kennan. OMN waan isaan jedhan dabarsuu dhabee miti. Isaan waan dhugaa hin qabneef dubbicha dheessu. OMN ammoo dhimmicha gabaasuun waanuma irraa eeggamuudha. Akeekkachiisa EBA irraa wanti hubatamu hin gabaasinaa jechuudha. Kuni ammoo mirga miidiyaa dhiibuudha.
Dhiibbaan isaanii kun dhiibbaa dhimma Oromoo ukkaamsuu akka ta’e kana caala wanti ibsu jira natti hin fakkaatu.
OMN Gurraa fi Ija Ummataati!
Mootummaan Bilxiginaa kun dhimma Oromoo ukkaamsuuf jecha OMN ukkaamsuuf carraaqqiin inni itti jiru guddaadha. https://t.co/HDXrYqhHHX pic.twitter.com/C3htf4L0J1